Love Lakes Dubai | Ọdọ mmiri nwere ụdị obi na-anọchi anya akara ịhụnanya
Enwere ike ịhụ ịhụnanya ebe ọ bụla, ọbụlagodi n'etiti ọzara.
Ị ga -ekwenyere m ma ị hụ DubaiỌdọ mmiri ọhụrụ nwere ụdị obi dị na Al Qudra. Ọdọ mmiri ndị ahụ bụ ihe nnọchianya nke akara ịhụnanya zuru ụwa ọnụ ma mara mma nke ukwuu na ị ga-ahụ ha n'anya.
Ọdọ mmiri ịhụnanya nke mmadụ mere ka a kpụrụ n'akụkụ ụyọkọ ọdọ mmiri ndị mmadụ mere na Al Qudra. Nke a bụ mgbakwunye dị ịrịba ama n'ọtụtụ ọrụ mmadụ mere nke a maara Dubai. Ọdọ mmiri ndị ahụ nwere ụdị obi jikọtara ọnụ, jupụtara n'ihe ndị metụtara ịhụnanya. O nwere osisi a kụrụ na-akọwapụta okwu 'ịhụnanya' n'akụkụ ọdọ mmiri.
Agara m ọdọ mmiri n'ụtụtụ oyi. Ọnọdụ gburugburu ọdọ mmiri ahụ dị jụụ. Ifufe dị jụụ na-efe efe, ebe dị jụụ na-eme ka m gbanwee gaa na ọnọdụ ntụrụndụ. Ọnọdụ gburugburu ọdọ mmiri dị jụụ; azụ, ọbọgwụ, na swans ga-enye gị ọmarịcha anya nke kwesịrị imikpu n'ime ya. Akara dị iche iche nke ịhụnanya gbara ọdọ mmiri ahụ na-eme ka ebe ahụ maa mma. Onye nwere ike ịhụ obi n'ebe nile - nke a pịrị apị n'ọnụ ụzọ ámá, n'elu osisi, ụzọ ọpụpụ na akara mbata bụ ụdị obi, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ebube ya kpughere ọdọ mmiri ndị ahụ Sheikh Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince nke Dubai na onyeisi oche nke Executive Council maka Dubai Government. Echiche ọdọ mmiri a sitere na Google Maps dị n'ụdị obi abụọ, gbanye onyonyo satịlaịtị ka ịhụ obi abụọ na maapụ gị. Edokwala akara na Al Qudra na-atụ aka na ebe ịhụnanya a. Ụfọdụ n'ime njirimara ka a na-ahụ nke ọma site n'elu.
Ọ bụ oge ị ga-eme njem gaa ọdọ mmiri ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ ihunanya ma ọ bụ ụfọdụ foto mara mma maka Instagram gị. Atụmatụ ịhụnanya ndị a ga-ekpochapụ gị n'ụkwụ gị. Anyị na-agbakwunye ya na ndepụta Dubai anyị ga-ahụrịrị. Ọ ga-abụrịrị na ị dọbarala obi n'elu ájá, ugbu a gaa na ịma mma nke ndị a.
By eze 21|2022-05-23T17:53:22+05:30January 31, 2019|blog|Comments Off on Ịhụnanya nwere ike ịchọta ebe ọ bụla, ọbụlagodi n'etiti ọzara.